RASMI: Kooxda Barcelona oo xaqiijisay magaca ciyaaryahankeeda, kaasoo laga helay faafaha Korona Fayras – Gool FM
Haaruun August 12, 2020
(Barcelona) 12 Agoosto 2020. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xaqiijisay in ciyaaryahan ka mid ah xiddigaheeda laga helay faafaha Korona Fayras, waxaana hadda si buuxda ay ugu dhawaaqday magaca ciyaaryahankaas.
Todibo waa ciyaaryahanka ka tirsan Kooxda Barcelona, kaasoo laga helay caabuqa KOFID 19, sida ay kooxdiisa goordhow xaqiijisay.
Saacadihii hore ee maanta ayay ahayd markii uu soo baxay warka sheegaya in ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta Barcelona laga helay faafaha Korona Fayras, laakiin hadda naadiga reer Spain waxa ay ku dhawaaqday magaciisa waana Todibo.
Daafaca dhexe ee Kooxda Barcelona ayaa dhankiisa waxa uu Instagram-ka ku xaqiijiyey in laga helay KOFID 19, isla markaana uusan ku jirin liiska xiddigaha 26-ka ciyaaryahan ah ee kooxdiisa Barcelona uga qeyb galaya kulanka Bayern Munich, kuwaasoo u safraya magaalada Lisbon.
Laacibkan daafaca ka ciyaara ayaa dib ugu soo laabtay Barcelona si uu ula qaato tababarka isu diyaarinta xilli ciyaareedka cusub kaddib markii uu heshiis amaah ah ku soo bixiyey naadiga Schalke, isagoo aan ku jirin liiska xiddigaha Barcelona ee Jimcaha wajahaya Bayern Munich kulan ka tirsan siddeed dhammaadka Champions League.
Xiddiga reer France ayaa kooxda kula soo biiri doonin isdiyaarinta xilli ciyaareedka cusub, inkastoo caafimaadkiisu hagaagsan yahay, haddana weli karaantiil ayuu ku sii jiri doonaa, mar walibana waa la hubin doonaa xaaladdiisa caafimaad, ilaa inta laga xaqiijinayo inuusan qabin faafaha Korona.
RASMI: Daafaca Kooxda Juventus ee Matthijs de Ligt oo qalliin guuleystay lagu sameeyey ... (Imise bilood ayuu garoomada ka maqnaanayaa?)